Izinyathelo zokuphepha zokushisela insimbi engagqwali egqoke insimbi - China Foshan Hermes Steel
Izinyathelo zokuphepha zokushisela insimbi engagqwali egqoke insimbi
Insimbi engagqwali egqoke ipuleti yensimbi yakhiwa izinhlobo ezimbili ezihlukene zamapuleti wensimbi, kufaka phakathi ukumbozwa (insimbi engagqwali) nongqimba wesisekelo (insimbi yekhabhoni, insimbi ephansi yengxubevange). Njengoba kunezinto ezimbili eziyisisekelo zensimbi ye-pearlite nensimbi e-austenitic lapho kufakwa insimbi engagqwali egqoke insimbi, i-welding yensimbi egqoke insimbi ingeyokushisela insimbi engafani. Ngakho-ke, izinyathelo zenqubo ezihambisanayo kufanele zithathwe ngesikhathi senqubo ye-welding ukuze zingagcini nje ngokuhlangabezana nezidingo zamandla ezakhiwo ze-welding zesendlalelo sesisekelo, kodwa futhi nokuqinisekisa ukumelana nokugqwala kwengubo. Uma ukusebenza kungalungile, kuzoba nemiphumela emibi. Izinyathelo ezithile zokuzivikela ngesikhathi sokushisela zingokulandelayo:
1, uhlobo olufanayo lwenduku yokushisela ayikwazi ukusetshenziselwa ukuhlanganisa izingxenye zensimbi ezingenasici ezingenasici. Ezingxenyeni ezingenasici zokuhlanganisa izinsimbi zensimbi, kubalulekile ukuhlangabezana nezidingo zamandla esakhiwo se-welding sesendlalelo sesisekelo nokuqinisekisa ukumelana nokugqwala kwengubo. Ngakho-ke, i-welding yensimbi egqoke engagqwali inokubaluleka kwayo. Isendlalelo sesisekelo nesendlalelo sesisekelo kufanele sifakwe nge-carbon steel kanye nama-electrode wensimbi aphansi ahambisana nezinto zesisendlalelo, njenge-E4303, E4315, E5003, E5015, njll .; ngendwangu yokumboza, ukwanda kwekhabhoni kufanele kugwenywe. Ngoba ukwanda kwekhabhoni kwe-weld kuzonciphisa kakhulu ukumelana nokugqwala kwezingxenye zensimbi eziyinhlanganisela engagqwali. Ngakho-ke, i-welding ye-cladding kanye ne-cladding kufanele ikhethe i-electrode ehambelana nezinto zokubopha, njenge-A132 / A137, njll .; ukufakwa kwesendlalelo soguquko ekuhlanganeni kwesendlalelo sesisekelo nokufakwa kwembesa kufanele kunciphise umphumela wokuxutsheka wekhabhoni yensimbi ekubunjweni kwensimbi engagqwali bese unezelela inqubo yokushisela Ukushiswa kokushiswa kwengxubevange yokwakheka. I-Cr25Ni13 noma i-Cr23Ni12Mo2 yohlobo lwama-electrode anokuqukethwe okuphezulu kwe-chromium ne-nickel, njenge-A302 / A307.
2. Okwezinsimbi zensimbi engagqwali egqoke insimbi, unqenqema olungalungile akufanele lweqe inani elivumelekile (1mm). Amapuleti wensimbi egqoke insimbi avame ukwenziwa ungqimba wesisekelo nongqimba lokumbozwa ngosayizi we-1.5 kuye ku-6.0 mm kuphela. Uma ucabanga ukuthi ngaphezu kokwanelisa izakhiwo zomshini wezinto, izingxenye zensimbi ezingenasici nazo zidinga ukuqinisekisa ukumelana nokugqwala kwengubo lapho kuthintwa nendawo ekhukhumezayo. Ngakho-ke, lapho kuhlanganiswa i-weldment, kuyadingeka ukuvumelanisa ungqimba lokugcwala njengesisekelo, futhi onqenqemeni lwesendlalelo sokufaka akumele seqe u-1mm. Lokhu kubaluleke kakhulu lapho ubhanqa amapuleti wensimbi egqoke insimbi enobukhulu obuhlukile. Uma ukungahambi kahle phakathi kwezendlalelo zokugcoba kukhulu kakhulu, i-weld empandeni yesendlalelo sesisekelo ingancibilikisa enye yensimbi engagqwali, okwandisa izinto zensimbi yensimbi empandeni wesendlalelo sesisekelo, okwenza i-weld ibe iqinile futhi iyabhidlika, futhi ngasikhathi sinye, insimbi engagqwali ejoyini le-buti iyancipha. Ubukhulu buzonciphisa impilo yensizakalo, kuthinte ikhwalithi ye-weld yesendlalelo sokugcwala, futhi kunzima ukuqinisekisa ukumelana nokugqwala kwesakhiwo esishiselwe.
3, akuvunyelwe ngokuphelele ukugoqa ungqimba lwenguquko noma ukuwelda ukugoqa insimbi engagqwali ngezinto zokushisela zesendlalelo sesisekelo se-welding: ngasikhathi sinye, vimbela okokufaka okokufaka okokufaka ekusetshenzisweni kabi ku-welding seam we-welding transition layer kanye ungqimba wesisekelo.
4. Lapho isendlalelo se-base layer sisetshenziselwa ukushisela ungqimba ohlangothini lokumboza, isixazululo sikashoki kufanele siboshwe ngaphakathi kuka-150mm ezinhlangothini zombili zomsele ukuvikela ukuvikela isendlalelo se-base nugget impahla ekunamatheleni ebusweni bensimbi engagqwali ngesikhathi senqubo yokushisela. Ifilimu ye-oxide ebusweni ithinta ukumelana nokugqwala kwensimbi eyakhiwe engagqwali. Izinhlayiya zokusabalalisa ezinamathele kufanele zihlanzwe ngokucophelela.
5. I-weld izimpande zesisekelo ungqimba isebenzisa i-electrode arc welding. Ukuze kuncishiswe ukuncibilika kwezinto ze-alloy ngaphansi kwesimo sokuqinisekisa ukungena, isilinganiso se-fusion kufanele sincishiswe. Ngalesi sikhathi, kungasetshenziswa isivinini sokushisela samanje esisheshayo futhi esisheshayo. Vumela ukujikisa kwe-lateral. Ukushiselwa kokufakwa kufanele kukhethe ukufakwa kokushisa okushisayo okuncane, ukuze isikhathi sokuhlala endaweni yokushisa eyingozi (450 ~ 850 ℃) sibe sifushane ngangokunokwenzeka. Ngemuva kokushisela, amanzi abandayo angasetshenziselwa ukupholisa ngokushesha.
6, uma insimbi egqoke insimbi itholakala ukuthi inamaphutha we-delamination ngaphambi kokushisela, i-welding ayivunyelwe. I-delamination kufanele isuswe kuqala, kulungiswe i-welding (okusho, i-overlay welding), kanye ne-welding ngemuva kokulungiswa.
7. Amathuluzi akhethekile kufanele asetshenziselwe ukuhlanza isendlalelo sesisekelo kanye nezinhlangothi zombili zokubopha. Isendlalelo sesisekelo kufanele sisebenzise amabhulashi wensimbi yensimbi yensimbi, futhi ukumbozwa kufanele kusetshenziswe amabhulashi wensimbi angenasici.